Ngaba unxibelelwano lusebenza njani kwiBar yesandi?
Xa ukhetha ibha yesandi, qiniseka ukuba ukhetha enye enonxibelelwano olufanelekileyo lweTV kunye nezinye izinto. Zimbini iindlela ezisisiseko zokutsala ibha yesandi kwinkqubo yakho. Eyona ndlela iqhelekileyo kukusebenzisa iTV yakho njengehabhu yokutshintsha: uqhagamshela isidlali sakho seBlu-ray, intambo o ...
Ngaba iiBhari zesandi ziyaSebenza kuMculo?
Ngokuthandwa kokudlala umculo ngaphandle kwamacingo, ayothusi into yokuba uninzi lwee bar zesandi ngoku zibonelela ngokusebenza. I-Bluetooth® eyakhelweyo ikuvumela ukuba usasaze umculo ngokulula kwi-smartphone yakho, ithebhulethi, okanye ikhompyuter esebenza ngeBluetooth. Isebenza nomculo ogcinwe kwifowuni yakho ...
Isitiriyo okanye isandi esijikelezileyo?
Kufanelekile ukuphindaphinda ukuba nayiphi na ibha yesandi iya kuvakala ngendlela engcono kuneTV yakho. Imivalo yesandi esisiseko ihlala iyilo loyilo lwe stereo oluvelisa ulwazi olufanayo lwesiteshi kunye nekhohlo njengeTV yakho. Kodwa zivakala zikhulu kakhulu enkosi kwizithethi ezikhulu ezixhaswe ngamandla ...
Ibha yesandi okanye isiseko sesandi?
Ukuza kuthi ga ngoku, besithetha ngemivalo yesandi enesimo esomeleleyo, esincinci sebar. Kodwa kukho olunye uhlobo: ibha yesandi-yesitayile, ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba sisiseko sesandi. Olu luyilo lubanzi, olusezantsi luhlala phantsi kweTV yakho kwaye luyayixhasa. Iziseko zesandi zine ...
Kuthekani nge-Subwoofer yeBar yam yesandi?
Ukuba ucinga ukuba unokufuna ibha yesandi kunye ne-subwoofer ehamba nayo, enokuthi inciphise ukubekwa kwakho kancinci, kodwa ubuncinci kunokuba ungalindela. Kungenxa yokuba phantse zonke ezi subwoofers azinazingcingo. Oko kukuthi, bafumana isiginali yeaudio ngaphandle ...
Ucwangcisela ukuba uyibeke phi indawo yakho yesandi?
Ukwazi apho uza kubeka khona ibha yesandi sakho kuya kwenza lula isigqibo sakho kwaye unciphise ukhetho lwakho. Zimbini izinto onokukhetha kuzo. Ukuba i-TV yakho ixhonywe eludongeni unganyusa ibar yesandi kanye ezantsi kwayo ukuze ucoceke, ujongeke ungacwangciswanga. Ukuba uya ...
Kutheni le nto ndifuna iBar yesandi?
Imivalo yesandi iqhume ekuthandeni kwiminyaka yakutshanje, kwaye inani leemodeli ngokufanayo liqhume. Ke sidibanise esi sikhokelo sokuthenga ukukunceda ukhawuleze ufumane ukuba yeyiphi incasa yesandi esisebenza kakuhle kuwe. Ibha yesandi yinkqubo yesithethi esihamba-kuyo-inye ...
Yintoni iBar yesandi?
Imivalo yesandi kufuneka ibekho kwiTV ezinamacala amancinci ... ubuncinci ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ngokuqinisekileyo, ezo zikrini zi-skinny zavelisa umfanekiso ocacileyo wekristale. Kodwa izithethi zabo ezincinanana, ezakhelwe-ngaphakathi azinakho ukuphinda zivelise incoko ngokucacileyo, kuncinci ukuhambisa uqhushumbo olukholisayo, ukuphazamiseka kwemoto nazo zonke ...
Izithethi zeWifi zeSandi, Iibhola zeSandi zeTv, Ibar yesandi yeWifi yeTv, I-TV kunye ne-Soundbar Mount, Ibar yesandi ye Alexa, Ibar yesandi,